Xaflad Sannad Guuraddii Afraad ee Inqilaabkii dhicisoobay ee Dalka Turkey | MOE & S
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska JSL Md.Axmed Maxamed Diiriye (Toorno) ayaa maanta khudbad taariikhi ah ka jeediyey sannad guuraddii afraad ee ka soo wareegtay isku daygii inqilaabkii dhicisoobay ee 15/July/2016-kii ka dhacay dalka Turkiga.
Xuskan oo lagu qabtay dugsiga Turkish Macaarif (Ex Xalane) ee caasimada Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargaysa ayaa waxa ka soo qayb galay safiirka Turkiga u fadhiya Somaliland Md.Alino Yan, guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Md.Jamaal Caydiid iyo marti sharf kale oo tiro badan.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska JSL Md.Axmed Maxamed Diiriye ayaa muwaadiniintii Turkiga ee inqilaabkaa naftooda ku waayey illaahay uga baryey in uu ugu deeqo janno fardowsa.
Geesta kale, wasiirku waxa uu sheegay, sida ay bulshada dalka Turkigu u difaaceen rabitaankooda cida ka hor imanaysa in ay shacabka reer Somalilandna u rabaan in loo qadariyo rabitaankooda iyo masiirka qarannimo ee ay iyagu go’aansadeen.
Waxaanu dawlada Turkiga ugu baaqay, in ay ku ixtiraamto rabitaanka shacabka Somaliland, sida ay u jecel yihiin in lagu taageero rabitaankooda.